'Ji'oota ja'an darban lammileen 44,500 Sawud Arabiyaa irraa deebiyaniiru' - BBC News Afaan Oromoo
'Ji'oota ja'an darban lammileen 44,500 Sawud Arabiyaa irraa deebiyaniiru'
27 Muddee 2018
Ji'oota jahan darbanitti lammiilee Itoophiyaa sanada imalaa osoo hin qabaatin galaana qaxxaamuranii gara Saawudi Arabiyaa imalan 44,500 biyyaatti akka deebi'an taasifamuu Ministeerri Dhimma Alaa beeksise.
Dhimmoota waqtaawaa irratti ibsa yeroo kennan ture Dubbi Himaan Ministeera Dhimma Alaa Obbo Mallas Alam kan kana dubbatan.
Torbee lamaan darbanittis lammiilee 4,000 ol biyyaalee akka Taanzaaniyaa, Liibiyaafi Yunaayitid Arab Imireets keessa turan gara biyyaa deebi'uu isaaniis Obbo Mallas dubbataniiru.
'Lammileen biyya gara garaatti hidhaarra turan biyyatti deebi'aa jiru'
Rakkoo baqqattummaafi dararaa lammiileerra gahu furuuf biyyoota garaagaraa waliin waliigaltee boobba'iinsa hojii mallatteessaaa jirra kan jedhan Dubbi Himaan Ministeerichaa daddabarsa namootaa seeraan alaa ittisuuf hojjetamaa akka jiru dubbatan.
Gama biraatin waggoonni lamaan Itoophiyaan miseensa Mana Maree Tasgabbii Biyyoota Gamtoomanii itti turte faayidaa biyyattii gama eegsisuufi ejjannoo Afriikaa gama beeksisuutiin milkaa'aa akka ture Obbo Mallas himan.
Itoophiyaan yeroo miseensummaa Mana Maree Tasgabbii Biyyoota Gamtoomanii Mudde 22 bara 2011 xumurti.
Ittigaafataumuummaa kana yeroo fudhannuu imaammatawaan afuriif dursa kenninee hojjechaa turres jedhan Dubbi Himaan ministerrichaa kun.
Murteewwan mana marichaan darban irratti faayidaa biyyaalessaa mirkaneessuu, nageenyi biyyoota ollaa akka mirkanaa'u gochuufi duulawwan nagaa eegsisuu sadarkaa addunyaatti taasifamaniif gumaachuun dhimmoota xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa turan akka ta'es kaasaniiru aanga'aan kun.
Dabalataanis dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniifi Gamtaa Afriikaa gidduutti hojimaanni si'ataan akka diriiru gochuufi mankaraaristummaafi shororkeessummaa gama ittisuutiinis biyyatiin yeroo miseensummaa isheetti xiyyeeffannoon hojjetaa turte jedhan.
Hojiif gara Gidduu Galeessa Bahaa deemuun eyyamame
Hojiilee hojjetamaniinis fudhatamni biyyattii guddateera, nageenyi biyyoota ollaas akka mirkanaa'uufi walitti dhufeenyi biyyoota ollaa akka fooyya'u gochuun bu'aan argameera jedhan.
Eertiraan erga biyyaaleen lamaan waldhabanii as ambaasaadarashee Itoophiyaa keessaa isaan jalqabaa gara Itoophiyaatti ergiteerti.
Preezidaant Saahlawarq Zawdee ambaasaadara Eertiraa dabalatee xalayaa muudama ambaasaadaroota biyyaalee afurii fudhataniiru.
Baqattoota Yaman: 'Namni akka itti bahu beeka malee akka itti deebiyu hin beeku'